Manafika ny fahavalo, mila manohitra ny tena… | NewsMada
Manafika ny fahavalo, mila manohitra ny tena…
Mafana hoditra, mikoha-maina, sempotra… Santio­nan’ny soratr’aretina Codiv-19 ireo. Inona na ahoana koa? Indrindra ny hoe tsy mahare fofon-kanina sy tsiron-kanina… Na izany aza, samy manana ny toe-batany ny tsirairay. Mety mitranga, ohatra, ny manakotsako ny tena manontolo, mora reraka, tsentsina ny orana, maina ny tenda…
Amin’izao ririnina izao, indrindra ho an’ny faritra Analamanga ivon’ny valanaretina: mety hifangaro na hafangaron’ny sasany be ihany amin’ny serisery sy ny kohakohaka tsotsotra amin’ireo soratr’aretina ireo. Misy ny tsy taitra na efa mitondra ny tsimokaretina aza, sanatria, na mitsabotsabo tena sy mandrimandry manana aretina.
Loza iray, loza roa… Amin’izao tena mampirongatra ny valanaretina izao, indrindra ho an’ny faritra Analamanga: mila malina sy mahina lalandava ny tsirairay. Tsy miandry ny aretina hihombo sy hitombo vao hikoropaka. Raha misy soratr’aretina mampanahy, mila manatona avy hatrany toeram-pitsaboana eny ifotony sy akaiky indrindra.
Aleo aza hoe tsy mitondra tsimokaretina nefa manatona toeram-pitsaboana amim-pitoniana toy izay efa ao anatin’ny fahasarotana ny aretina vao hitotototo. Ny mahavalalanina amin’izao, efa misy ny itrangan’ireo karazana soratr’aretina izao nefa miraikiraiky: miandry inona? Na noho ny tsy fahalalana, na ny tsy fahatokisana fitsaboana…
O rey olona, ankoatra ny tsy fitandremana ireo fepetra ara-pahasalamana fisorohana ny valanaretina, anisan’ny mahavoa koa izao izay hoe mandrimandry manana aretina izay. Nefa tsy mitsisy ny valanaretina, haingana be ny fanafihany raha kelikely ny hery fiarovana ny tena… Tsy misy toy ny malina sy mahina mandrakariva ihany.
Zava-doza ihany koa ny manaraka ny fitsaboana hoe mety amin’ny hafa nefa mety tsy hahomby amin’ny tena. Aleo manatona toeram-pitsaboana ihany. Manafika ny fahavalo hoe tsy hita maso, mila manohitra ny tena: manaraka fepetra, manatona toeram-pitsaboana avy hatrany raha vao misy mampanahy… amim-pitoniana hatrany.